बैंकलाई व्यवसायीको जवाफ : ‘भित्र भोकमरी, बाहिर महामारीमा के को ब्याज र किस्ता? – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/बैंकलाई व्यवसायीको जवाफ : ‘भित्र भोकमरी, बाहिर महामारीमा के को ब्याज र किस्ता?
जेठ १७, २०७७ नवलपरासी : कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि बैंक र व्यवसायीबीच तनाव बढ्न थालेको छ। कर्जा लगेका व्यवसायीहरूलाई बैंकले किस्ता र ब्याज तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्‌ भने व्यवसायीहरूले बैंकलाई तत्काल सो रकम भुक्तानी नसक्ने जवाफ दिने गरेका छन्‌। व्यापार-व्यवसाय ठप्प भएपछि पश्चिम नवलपरासीका व्यवसायीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संघसंस्था बाट लिइएको ऋणको ब्याज र किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। अहिले वित्तीय संघ-संस्थाले धमाधम ताकेता गर्न थालेपछि व्यवसायीहरु अत्तालिन थालेका छन्।
जनकपुरमा पैसा फ्याल्दै हिड्ने दुई महिला मध्ये एकमा आरडीटी टेष्ट पोजिटिभ